Nyocha Calculator Nkwụ ụgwọ Payraise | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 12, 2006 Douglas Karr
Folmụaka nwere ike icheghị na nke a bụ ihe na-atọ ụtọ dị ka m na-eme, mana nke a bụ nseta ihuenyo nke m hits Payraise mgbako. Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ na ihe niile hits dị n'izu na ọ bụla na ngwụsị izu. Echere m na m nwere ụdị ndị ọbịa 2, ndị na-agbakọ ụgwọ maka onye ọzọ ma ọ bụ ndị na-agbakọ ụgwọ maka onwe ha. M ga-eche na nke ikpeazụ otu ga-ịlele stof dị ka nke a na-izu ụka… ma m maa.
Amaara m na m kwesịrị iwepu saịtị nke ị nweta nsonaazụ na popup! N'afọ a, ma eleghị anya. 🙂
Blọọgụ, Clogs na Akụkọ akụkọ
Sep 23, 2009 na 1:25 PM
Maka ndị chọrọ ịma… nke a bụ Mba 1 saịtị maka ịgbakọ ụgwọ akwụ ụgwọ gị! Ana m akwado ya. N’oge na-adịghị anya, enwetara m ego ịkwụ ụgwọ tinyekwara ego mgbakwunye nke metụtara ụgwọ ezumike nka. M gbakọọ ọnụ ọgụgụ ndị jikọtara wee nata ozi ziri ezi nke gosipụtara na ụgwọ ọnwa m. Daalụ, Daugh, maka inye ngwaọrụ a bara uru.